Mari yezvikamu Amazon.com, Inc.
Nhengo dzeAmazon.com, Inc. nhasi, mutengo weAMZN iri paIndaneti ikozvino, inowanidza mitengo yeAmazon.com, Inc..
Amazon.com, Inc. Stock price Online chati Nhoroondo yemari Capitalization Pfuma Inowanikwa Kuyera
AMZN = 3 389.79 US dhora
-47.57 USD (-1.4033%)
Ruzivo rwekushandurwa kwe Amazon.com, Inc. mu US dhora inovandudzwa kamwe pazuva. Inotaridza mutengo wekupedzisira wemitengo ye Amazon.com, Inc. mu US dhora. Mutengo wemasheya kubva kune zvakasimbiswa zvinyorwa. 1 stock of Amazon.com, Inc. is 3 389.79 stock of US dhora. 1 stock of Amazon.com, Inc. inodonha ne 47.57 US dhora. I Amazon.com, Inc. mwero wakadzikira kubva pa US dhora ne -138 mazana emakumi muzana muzana.
Amazon.com, Inc. inyanzvi yekambani inayo US dhora
Mwedzi wapfuura, Amazon.com, Inc. inogona kuchinjaniswa 3 477 US dhora. Mwedzi mitatu yadarika, Amazon.com, Inc. inogona kutengwa 3 478.05 US dhora. Gore rapfuura, Amazon.com, Inc. inogona kutengeswa ye 3 104.20 stock ye US dhora. -4.82% - shanduko mumutengo wemitengo we Amazon.com, Inc. mu US dhora yeUkraine pasvondo. Shanduko yemutengo wemasheya we Amazon.com, Inc. mu US dhora kwemwedzi iri -2.51%. 9.2% pagore - shanduko mumutengo wemasheya we Amazon.com, Inc..
Stock quotes Amazon.com, Inc. US dhora
AMZN Kuti US dhora (USD)
1 AMZN 3 389.79 US dhora
5 AMZN 16 948.95 US dhora
10 AMZN 33 897.90 US dhora
25 AMZN 84 744.75 US dhora
50 AMZN 169 489.50 US dhora
100 AMZN 338 979 US dhora
250 AMZN 847 447.50 US dhora
500 AMZN 1 694 895 US dhora
Kana iwe uine 33 897.90 US dhora, ipapo mu British Virgin Islands vanogona kuchinjaniswa kwe 10 stock of Amazon.com, Inc.. Stock quote converter ikozvino inopa 84 744.75 US dhora ye 25 stock of Amazon.com, Inc.. Kana iwe uine 169 489.50 US dhora, ipapo mu British Virgin Islands vanogona kutengeswa kwe 50 stock of Amazon.com, Inc.. Kuti ishandure 100 stock of Amazon.com, Inc., 338 979 US dhora zvinodiwa. Kana iwe uine 847 447.50 US dhora, saka mu British Virgin Islands unogona kutenga 250 stock ye Amazon.com, Inc.. Nhasi, 1 694 895 US dhora inogona kutengeswa ye 500 stock ye Amazon.com, Inc..
AMZN mutengo wemari yakaitika
Nhasi pa 3 Zvita 2021, 1 stock ye Amazon.com, Inc. = 3 389.790 US dhora. Amazon.com, Inc. mu US dhora pa 2 Zvita 2021 yakaenzana ne 3 437.360 US dhora. Amazon.com, Inc. mu US dhora pa 1 Zvita 2021 yakaenzana ne 3 443.720 US dhora. Iyo yakakwira Amazon.com, Inc. mu US dhora mutengo wemasheya mu yaive pa 29/11/2021. Iyo yepasi pasi AMZN / USD mutengo wechitoro mu yaive pa 03/12/2021.
Chimwe chikamu cheAmazon.com, Inc. nhasi chinomira pa 3 389.79 $. Mutengo weAMZN wehove washanduka kusvika -1.4033% kana -47.57 USD kubvira musi wekupedzisira wekutengesa. Iwe unogona kutenga zvikamu zana zveAmazon.com, Inc. zve 338 979 US dhora kana kutengesa 50 mazana eAMZN ye 169 489.50 US dhora.
Amazon.com Inc inotengesa mutengesi. Kambani inotengesa zvigadzirwa zvayo kuburikidza newebsite yepa webhusaiti iyo inopa rubatsiro, zvakadai sekutengeserana mazano uye co-branded credit card zvibvumirano. Inopawo michina yemagetsi seA Kindle e-readers uye mapiritsi emoto.
Zvikamu zve Amazon.com, Inc. mazuva ano, mutengo weiyo AMZN iri paIndaneti ikozvino.
Mutengo AMZN online
Amazon.com, Inc. real-time stock quotes, AMZN price price online, AMZN chart.
Amazon.com, Inc. Kuti US dhora chati kubvira pakutanga kwekutengesa.
Nhamba yekutengeserana kweAMZN zvikamu nhasi uye nhoroondo yepamusoro yeAmazon.com, Inc..
Mari Amazon.com, Inc.
Amazon.com, Inc. mubhadharo wega wega
Miridzo yepamwedzi yekambani Amazon.com, Inc., inorondedzera kubatsirwa kwezvikamu AMZN zvegore ra2021.
Nyora pamusoro pemigumisiro yemari yekambani Amazon.com, Inc., Amazon.com, Inc. mari yegore gore ra2021.
Kuyera kwekambani Amazon.com, Inc.
Amazon.com, Inc. munyika